रानी ऐश्वर्य सुन्दरी मात्र थिइनन्, हठी पनि थिइनन् । उनका अगाडि कसैले मत बझाउन सक्दैनथ्यो । उनले बोलेपछि बोलिन्, बोलिन् । उनी आफूलाई ‘ए क्लास’को राणाकी छोरी ठान्थिन् । जुद्धशमशेरकी खलककी उनले चन्द्रशमशेर खलक (‘सी’ क्लास) की देवयानी राणालाई बुहारी स्वीकार्न नमान्दा २०५८ जेठ १९ गतेको नारायणहिटी घटना भएको भन्नेहरुको कमी छैन ।
विख्यात चिनियाँ पत्रकार चाउ शेङ्गपिङ्गको पुस्तक ‘चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल’ सार्वजनिक !
केपी ओली फेरि राष्ट्रवादी बन्न थाले, चुनावी फण्डा कि साँच्चिकै राष्ट्रवादी ? मोदीलाई चेतावनी (भिडियो)
‘चीन मुर्दाबाद, चिनियाँ हस्तक्षेप बन्द गर’ भन्दै काठमाडाैँमा चिनियाँ राजदूतको पुतला दहन !
किन लुकाउन चाहन्छिन् पूर्वयुवराज्ञी हिमानी आफ्नो अमेरिकि भ्रमण ? यस्तो छ खास कारण
मौसम जानकारी – वर्षा र हिमपातको सम्भावना, जोगिन २४ घण्टे चेतावनी (बिज्ञप्ति सहित)